Warshadda Mashiinka Buuxinta Dhalada Shiinaha Glass Glass iyo alaab-qeybiyeyaal. Higee
Nooca Koobka Tooska ah Kiimikada ...
Shaambo otomaatig ah Buuxinta M ...
Buuxinta Sharoobada Awood Sare ...
Saliida muhiimka ah ee machi buuxinta ...
Khadkeena mashiinka buuxinta Beer wuxuu isku darayaa mashiinka dhalada, buuxinta iyo mashiinka mashiinka hal mashiin monoblock ah. Nidaamyada waxaa si toos ah loogu fuliyaa si toos ah. Buuxinta dhalada PET ama dhalada dhalada ah ama dhalada dhalada ah dhamaantood waa la habeyn karaa.
Kartida Bixinta: 30 Sano / Bisha
Ereyga ganacsiga: FOB, CNF, CIF, EXW
Dekedda: Dekedda Shanghai ee Shiinaha
Muddada lacag bixinta: TT, L / C
Waqtiga hogaaminta wax soo saarka: Caadi ahaan 30-45 maalmood, waa in dib loo xaqiijiyaa.
Tartan Koobka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka 'Monoblock Production Line'
Waxyaabaha mashiinka ee taabanaya dareeraha ayaa ka sameysan bir birta ah oo tayo sare leh, Qaybaha muhiimka ah waxaa lagu sameeyay qalab mashiin tiro ahaan lagu kontoroolo, xaalada mashiinka oo dhana waxaa lagu ogaanayaa aaladda sawirka koronto-dhaliyaha. Waxay ku jirtaa faa'iidooyinka otomaatiga sare, hawlgalka fudud, iska caabinta wanaagsan ee wanaagsan, xasiloonida sare, heerka hoos u dhaca hooseeya, iwm.
Waxaan sidoo kale ku qalabeyn karnaa qadka wax soo saarka biirka qalabka daaweynta biyaha, nidaamka qalabka isku dhafka hore, iyo nidaamka wax lagu duubo oo ay ku jiraan mashiinka calaamadeynta gacmaha oo hoos u dhaca, mashiinka wax lagu duubo oo hoos u dhaca iwm.
1.Ber Dhalo Quudiyaha
2. Mashiinka Buuxinta iyo Mashiinka Mashiinka
Qalabkan Buuxinta Beerku wuxuu kobcinayaa tiknoolajiyada gudbinta qoorta dhalada si uu u xaqiijiyo dhaqso otomaatig ah, buuxin iyo xirasho. Waxay ku qalabeysan tahay xakamaynta cadaadiska saxda ah ee CO2, sidaa darteed heerka dareeraha marwalba wuu xasilloon yahay. Codsiga aaladaha alaarmiga ee loogu talagalay dhalada, dhalada oo yaraata, dhalada oo waxyeello soo gaarto, daboolida dhalada, culeys ka saarida iwm, meelo dhowr ah ayaa hubiya tayada wax soo saarkeeda. Mashiinka wuxuu helaa faa'iidooyinka kalsoonida sare, waxtarka sare, darajada sare ee otomaatiga iyo hawlgalka fudud, iwm.
Structure Qaab dhismeedka gudbinta qoorta oo qoyan, dhalada gaarsiinta waa deggan tahay; aad u habboon oo deg deg ah in loo isticmaalo dhalooyin kala duwan oo lagu buuxinayo isla mashiinka adoo hagaajinaya dhererka xamuulka iyo dhowr qaybood oo isweydaarsi ah.
● aragtida buuxinta ee 'Isobaric', xawaaraha buuxinta waa dhakhso oo saxsanaanta ayaa sareysa; heerka buuxintu waa la hagaajin karaa.
Mashiinka wax lagu maydho ee guga, dhalooyinka madhan ayaa loo rogaa 180 ° iyada oo loo raacayo liiska hagaya ee loogu mayrinayo gudaha; sanka maydhashada ayaa korsada buufiska qaabeynta godad badan si uu u luqluqo dhalada hoosta, waxtarka dhaqista ayaa sarreeya.
Machine Mashiinka Mashiinka (Capping machine) wuxuu qaadanayaa tikniyoolajiyadda Faransiiska, xiritaanka waxaa leh magnet torque; qabashada daboolka waxay korsataa laba jeer qabashada si loo hubiyo run ahaanta. Xoogga xirashada waa la hagaajin karaa, xiritaanka xaddiga joogtada ah ma dhaawici doono koofiyadaha koofiyaduna way wanaagsan tahay waana la xiray.
Machine Mashiinka oo dhan waxaa ku shaqeeya shaashad taabasho ah, oo ay maamusho PLC iyo soo noqnoqoshada soo noqnoqodka iwm.
Koofiyadaha furaha ayaa koofiyadaha u gudbiya mashiinka dabacsan ee dabacsan. Waxay leedahay hawsha dhalo aan lahayn furitaan dabool, xakamayn otomaatig ah.
4.Gawaarida Dhalada Beerta
Hore: Mashiinka Mashiinka Buuxinta kulul ee PET
Xiga: Khadka mashiinka buuxinta Dhalada Dhalada